Egwuregwu Arsiv - RayHaber
Sivas MÜSİAD gara na TÜDEMSAŞ
Ndị Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ na Ndị Mmekọ (MUSIAD) Sriva Branch Branch Salim Eminoglu na ndị òtù Board gara TUDEMSAS. Onye isi ochichi Eminoğlu na ndi otu ndi biara na onye isi oru TÜDEMSAŞ General Mehmet Başoğlu n 'ulo oru ya [More ...]
Karasu: Kırmızı TÜDEMSAŞ bụ Red Line nke Sivas Kar
Ndi Republican People's Party Sivas Deputy Ulas Karasu, na okwu ya na nzuko omeiwu, 8 February, na President Recep Tayyip Erdogan na Sivas, okwu ya katọrọ nzuko ya na Sivas. Karasu, ız N'oge gara aga, ị mechibidoro ndị Dikimevini na ngalaba mpaghara na Sivas, [More ...]
Kayseri Chamber of Commerce Na-eleta TÜDEMSAŞ
Ndị òtù Kansụl Kayseri na 25. Kọmitii nke mejupụtara Kọmitii Nhazi Ụlọ Ọrụ wee bịa Sivas iji mee ọtụtụ nleta. Mgbe ha gara na Ụlọ Ahịa nke Ahịa na Ụlọ Ọrụ Sivas, Ụlọ Ahịa nke Kayseri bịara TÜDEMSAŞ. [More ...]
Ekele maka onye isi ọrụ TÜDEMSAŞ Manager Başoğlu si Peker
Ndị ọrụ njem na ndị ọrụ ụgbọ oloko na ndị nnọchiteanya ahụ gara leta onyeisi oche ndị isi oche TÜDEMSAŞ, Mehmet Başoğlu n'ọfịs ya. Peker kelere Başoğlu maka ibipụta iwu maka ịmalite ọrụ na ịgbanwe aha ahụ, [More ...]
Minista Turan na-akọwa 2019 Afọ Target na Systems okporo ụzọ
Transport na Infrastructure Minister M. Cahit Turhan, Ozi Technology Agency (ICTA) haziri site Ministry "2018 afọ 2019 afọ nke ntule na ihe mgbaru ọsọ" kwuru ná nzukọ banyere ihe na pịa. "Anyị ẹdude okporo ígwè e, melite ma bulie ụkpụrụ, anyị ga-amụba ikike." Turhan, ngwa ngwa [More ...]
Mkparịta ụka TUDEMSAS na Sivas Grows!
TÜLOMSAŞ, TÜVESAŞ na TÜDEMSAŞ, bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ atọ dị mkpa nke ụlọ ọrụ locomotive na ụgbọ ala anyị na mba anyị, mere ka enweghi nsogbu. Ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na Adapazarı, Eskişehir na Sivas. [More ...]
Freight n'ụgbọala breeki System ga-emepụta na Turkey
Ebumnuche% 100 na mpaghara ebe a na-emepụta usoro breeki na ọtụtụ azụmahịa na ọtụtụ mba gburugburu ụwa Ndị ọrụ ụlọ ọrụ Knorr Bremse na osisi dị na Sivas TÜDEMSAŞ compact braking system came together for production home. [More ...]
Ebumnuche TÜDEMSAŞ bu ichọputa ugbo ugbo ala na otu percent
N'okpuru nduzi nke TÜDEMSAŞ, ọmụmụ banyere ebe 100 nọ n'ụgbọala ụgbọala na-emepụta na-aga n'ihu na-agbadaghị ala. Otu n'ime ndị kasị mkpa na-achọ na mmepụta nke ụgbọala malitere ịmụrụ technology maka amị akụkụ nke breeki usoro ke Turkey. Nyocha dị mkpa na mba anyị [More ...]
TÜLOMSAŞ mepụtara ụgbọ ala na nke mba
TÜLOMSAŞ nwetara ọkwa mbụ n'ime mmepụta ụlọ na nke mba ma mepụta ụgbọala ụgbọ ala na nke mba. Mmepụta ụgbọ ala, dị ka ụgbọala, ụgbọ ala ndị ahịa na-acha ọkụ ọkụ, bọmbụ, akpachi-igbe na traktị nke Car Transport Wagon nke e bipụtara na TULOMSAS, [More ...]
Okwu Lojmanlar'sa Hedef TÜDEMSAŞ
Isi okwu nke ijikọta enyemaka atọ nke TCDD (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ TÜVASAŞ) na agbata, tinyewo TÜDEMSAŞ General Directorate n'ime oge anụ. A maara na na afọ 2019, n'ihi atumatu ndị na-ezighị ezi, enweghị ego maka itinye ego na TÜDEMSAŞ. Enweghị ego n'ichepụta na [More ...]